Xilli hay’adaha reer Yurub ay raadinayaan isu-dheellitirnaan-siyaasadeed cusub, oo magacaabista madaxweynayaasha hay’adaha ugu waaweyn Yurub ay qaadatay masraxa xudunta u ah dhowr toddobaad, ma la yaabanahay waxa aan runtii ka naqaanno hay’adahaas?
Nolosheenna xirfadeed sida nolosheenna gaarka ah, waxaan si sii kordheysa uga hor imaaneynaa waxa loogu yeero xeerarka "Yurub".
Sidee loo qeexaa oo loo qaataa xeerarkan? Sidee ayay hay'adaha Yurub ee go'aan ka gaaraya shaqadan?
MOOC-da waxay ujeedadeedu tahay inay caddayso waxa ay yihiin hay'adaha Yurub, sida ay u dhasheen, sida ay u shaqeeyaan, xidhiidhka ay la leeyihiin mid kasta oo ka mid ah Dawladaha xubinta ka ah Midowga Yurub, hababka go'aan qaadashada. Laakiin sidoo kale habka uu muwaadin kasta iyo actor saamayn ku yeelan karaan, si toos ah ama iyada oo loo marayo wakiiladooda (MEPs, dawladda, jilayaasha bulshada), content ee go'aamada Yurub, iyo sidoo kale daawooyinka laga yaabaa in ay jiraan.
Sida aan arki doonno, hay'adaha Yurub ma aha kuwo fog, xafiisyo ama qarsoodi ah sida sawirka inta badan la soo bandhigo. Waxay ka shaqeeyaan heerkooda dano ka baxsan nidaamka qaranka.
Hay'adaha Yurub Janaayo 17th, 2022Tranquillus
READ Sida loo maalgashado 1000 Euro
horeSiyaasadda biyaha dadweynaha 5 su'aalood
socdaMusuq-maasuqa, eexda, wax-is-daba-marinta...sida looga hortagi karo maamulka deegaanka?
Aasaaska sharciga aaska
Ku kobci meheraddaada isbeddel dijitaal ah
Sax, ma aniga?